Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Kanseran'ny nono voalohany: Ahoana no hanampian'ny Verzenio?
Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Vaovao momba ny fahasalamana
Ny US Food and Drugs Administration (FDA) dia nanaiky an'i Eli Lilly sy ny Company (NYSE: LLY) Verzenio® (abemaciclib), miaraka amin'ny fitsaboana endocrine (tamoxifen na mpanakana aromatase), ho an'ny fitsaboana adjuvant ny marary efa lehibe manana receptor hormonina- tsara (HR +), mpandray anjara amin'ny fitomboan'ny valanaretina olombelona 2-négative (HER2-), node-positive, homamiadan'ny nono voalohany (EBC) atahorana hiverimberina ary isa Ki-67 ≥20% araky ny nofaritan'ny ankatoavin'ny FDA fitsapana. Ki-67 dia marika iray amin'ny fihanaky ny sela. Verzenio no voalohany sy hany fanakanana CDK4 / 6 nankatoavina ho an'ity vahoaka marary ity.
"Rehefa mandeha ny fotoana, ny valim-pikarohana natao tamin'ny programa fampandrosoana Verzenio dia naneho ny mombamomba ny mpamadika CDK4 / 6, ary ny angon-drakitra manandanja avy amin'ny fitsarana monarchE izay nanohana an'io famantarana vaovao io momba ny homamiadan'ny nono HR + HER2- dia maneho dingana lehibe iray hafa alohan'ny olona izay mila safidy fitsaboana vaovao, "hoy i Jacob Van Naarden, filoha lefitra zokiny, CEO an'ny Loxo Oncology ao Lilly ary ny filoha, Lilly Oncology. "Faly izahay tamin'ity fankatoavana voalohany ity tao amin'ny faritra adjuvant ary satria mitohy mihamatotra ireo angona ireo dia manantena izahay fa hisy fotoana bebe kokoa hiara-hiasa amin'ireo manampahefana ara-pahasalamana hanitatra ny fampiasana Verzenio amin'ity toerana ity."
izy Verzenio Phase 3 monarchE trial is a randomized (1: 1), open-label, cohort roa, multicenter fianarana amin'ny olon-dehibe vehivavy sy ny lehilahy miaraka amin'ny HR + HER2-, node-positive, resected EBC miaraka amin'ny klinika sy pathological endri-javatra mifanaraka amin'ny risika lehibe ny fiverenan'ny aretina. Nandritra ny fitsapana, dia narahi-maso ny marary mba hahazo roa taona an'ny Verzenio 150 mg indroa isan'andro miampy ny safidin'ny dokotera fitsaboana endocrine mahazatra, na fitsaboana endocrine mahazatra fotsiny. Ny marary amin'ny sandry fitsaboana roa dia notoroana hevitra hanohy handray fitsaboana endocrine adjuvant hatramin'ny 5-10 taona araka ny nanoloran'ny klinika azy ireo. Ny teboka voalohany amin'ny fandinihana dia ny fahaveloman'ny aretina tsy mitongilana (IDFS) ary nihaona tamina famakafakana vonjimaika efa voafaritra mialoha ao amin'ny mponina nokarakaraina (ITT), miaraka amin'ny fanatsarana IDFS lehibe ho an'ireo marary voatsabo miaraka amin'ny Verzenio plus ET raha oharina amin'ireo tsaboina amin'ny ET irery. Mifanaraka amin'ny torolàlana omen'ny manam-pahaizana, ny IDFS dia nofaritana ho ny halavan'ny fotoana alohan'ny hiverenan'ny homamiadan'ny nono, misy cancer vaovao mivoatra, na maty.
Rehefa nahatratra ny teboka voalohany amin'ny fandinihana ny vahoaka voasoratra anarana manontolo, ny fanadihadiana efa voafaritra mialoha momba ny IDFS dia notontosaina ihany koa tamin'ireo mararin'ny toe-pahasalamana sy toe-pahasalamana mety hampidi-doza ary isa Ki-67 ≥20%. Ity fanadihadihana zana-tarika ity (N = 2,003) dia nahitana ireo marary niaraka tamin'ny ≥4 positive axillary lymph node (ALN), na 1-3 ALN tsara izay nisy ny kilasy faha-3 sy / na ny haben'ny fivontosana ≥5 cm, ary ny isa nisy ny ki-67. ≥20%. Nisy ihany koa ny fanatsarana ny statistikan'ny IDFS ho an'ity antokon'olona marary efa nahazo ny Verzenio miampy ET ity raha oharina amin'ireo nahazo ET irery (HR = 0.643, 95% CI: 0.475, 0.872, p = 0.0042).1,3
Ity fankatoavana ity dia mifototra amin'ny valiny mahomby avy amin'ny famakafakana an'ity vondrona ity miaraka amin'ny fanaraha-maso fanampiny, natao post-hoc. Amin'ity famakafakana ity, ny Verzenio nomena miaraka amin'ny ET dia nanohy naneho tombony lehibe amin'ny klinika, miaraka amin'ny fihenan'ny 37 isan-jato ny mety ho fiverenan'ny homamiadan'ny nono na ny fahafatesana raha oharina amin'ny adjuvant ET irery ho an'ireo marary manana trangan-javatra klinika sy patholojika be dia be ary Ki -67 isa ≥20% (HR: 0.626 [95% CI: 0.49-0.80]), ary tombony feno amin'ny tahan'ny hetsika IDFS 7.1 isan-jato amin'ny telo taona. Ny isan'ny hetsika IDFS tamin'ny fotoana nanadihadiana dia 104 tamin'ny Verzenio miampy ET raha ampitahaina amin'ny 158 amin'ny ET fotsiny. Ny tahiry fahaveloman'ny ankapobeny dia tsy matotra ary mitohy ny fanaraha-maso fanampiny.
Ny fiatraikany ratsy avy amin'ny monarchE dia nifanaraka tamin'ny mombamomba ny fiarovana an'i Verzenio.2 Ny fiarovana sy ny fandeferana dia nanombanana tamin'ny marary 5,591 10. Ny fiatraikany ratsy indrindra mahazatra voalaza (> 2%) amin'ny sandan'ny Verzenio miampy ET (tamoxifen na aromatase), ary> XNUMX% avo kokoa noho ny sandan'ny ET fotsiny, dia ny fivalanana, ny aretina, ny havizanana, ny maloiloy, ny aretin'andoha, ny mandoa, ny aretin'andriana , mampihena ny fahazotoan-komana, fanina, maimaika ary alopecia.3 Ny tsy fahita matetika amin'ny laboratoara (naoty ≥10% rehetra) dia nitombo ny kôlikinina, nihena ny isan'ny sela fotsy, nihena ny isan'ny neutrofil, nihena ny anemia, ny isan'ny lymphocyte, ny isan'ny platelet, nitombo ny ALT, ny AST ary ny hypokalemia.
Ity fankatoavana an'ny FDA ity dia miorina amin'ny porofo efa voaporofo ho an'ny Verzenio, izay efa nekena amin'ny fitsaboana karazana HR + HER2- homamiadan'ny nono efa mandroso na metastatika. Mifanaraka amin'ity fankatoavana ity, ny FDA dia nanitatra ny fampiasana ny Verzenio amin'ny famantarana rehetra, raha omena miaraka amin'ny fitsaboana endocrine, mba hampidirina lehilahy. Verzenio dia misy amin'ny tanjaky ny tablette 200 mg, 150 mg, 100 mg, ary 50 mg.
"Ny famolavolana sy ny valin'ny fandinihana ny monarchE dia manova fomba fanao ary maneho ny fandrosoana voalohany amin'ny fitsaboana adista ny homamiadan'ny tratran'ny HR + HER2- ao anatin'ny fotoana lava be," hoy i Sara M. Tolaney, MD, MPH, Harvard Medical School, Dana- Farber Cancer Institute, ary mpanadihady momba ny fandinihana ny mpanjaka. "Ity fankatoavan'ny FDA ho an'ny Verzenio miaraka amin'ny fitsaboana endocrine ity eo am-piandohan'ny homamiadan'ny nono dia mety hanjary fari-pitsaboana vaovao ho an'ity mponina ity. Amporisihina izahay amin'ny fihenan'ny mari-pahaizana mety hiverimberina na dia mihoatra ny roa taona aza ny fitsaboana ireo marary ireo, ary feno fankasitrahana aho afaka manolotra izany ho toy ny safidy fitsaboana amin'ireo marary. "
“Ny vehivavy sy ny lehilahy miaina manana risika be HR + HER2- ny homamiadan'ny nono dia maniry ny hanao izay rehetra azony atao mba hampihenana ny mety hisian'ny aretina hiverina, miaraka amin'ny fanantenana ho velona tsy voan'ny homamiadana. Ny fankatoavana an'i Verzenio dia manome safidy fitsaboana vaovao hanampiana azy ireo amin'izany, "hoy i Jean Sachs, tompon'andraikitra ambony, Living Beyond Breast Cancer. "Ity fanekena ity dia mitondra fanantenana vaovao ho an'ny vondron'olona voan'ny homamiadan'ny nono."
Ny angona manohana an'io fankatoavana io dia haseho ao amin'ny Virtual Plenary Virtual oncology (ESMO) 14 Oktobra.
Ny fanamarihana ho an'ny Verzenio dia misy fampitandremana sy fitandremana amin'ny fivalanana, neutropenia, aretin'ny havokavoka interstitial (ILD / pneumonitis), hepatotoxicity, thromboembolismus amin'ny vena, ary ny poizina embryo-foetus. Ampianaro ny marary amin'ny famantarana voalohany amin'ny seza lava mba hanombohana fitsaboana antidiarrheal, hampitombo ny tsiranoka am-bava ary hampandre ny mpitsabo azy ireo. Manaova fanisan-dra feno sy fitsapana fiasan'ny aty alohan'ny fanombohan'ny fitsaboana Verzenio, isaky ny tapa-bolana mandritra ny roa volana voalohany, isam-bolana mandritra ny roa volana manaraka ary araka ny naseho tamin'ny klinika. Miorina amin'ny valiny dia mety mitaky fanovana fatra i Verzenio. Araho maso ny mararin'ny famantarana sy ny soritr'aretin'ny trombosis ary ny embolisme pulmonary ary mitsabo araka ny tokony ho izy ara-pitsaboana. Manoro hevitra ireo marary mety ho voan'ny zaza ao am-bohoka ary mampiasa fanabeazana aizana mahomby.
Jereo ny fampahalalana momba ny fiarovana manan-danja etsy ambany ary feno Fametrahana fampahalalana ho an'ny fampahalalana fanampiny.
Tsindrio Eto hijerena ireo infographic cancer an'ny nono taloha.
Tsindrio Eto hijerena ny infographic trial an'ny mpanjaka.
Kitiho raha hijery ny sarin'ny vokatra Verzenio: 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg.